Wax ku darso - El Centro de la Raza
Caafimaadka iyo guusha El Centro de la Raza adiga ayay kugu bilaabataa. Taageero ka timaada saldhig ballaadhan oo xubnaha bulshada ah oo ay ku jiraan aasaaska, shakhsiyaadka iyo shirkadaha ayaa muhiim u ah guushayada waxaanan kaa codsanaynaa inaad si taxaddar leh uga fiirsato samaynta hadiyad shaqsi ahaan macno leh - waxay noqon kartaa hadiyadda ugu weyn ee aad waligaa samaysay.
Ku -deeqidda tabarucaadu waa sahlan tahay waxaana kuu soo bandhigaynaa siyaabo badan oo aad wax ugu biirin karto:
Ku tabaruc kaarka deynta: Riix halkan si aad ugu deeqdo kaarka deynta waxaana laguu tilmaami doonaa goob aamin ah si loo socodsiiyo Click & Pledge. Waxa kale oo aad diyaarin kartaa deeq bil kasta soo noqnoqota!
Samee hadiyad bille ah ama ballanqaad: Tixgeli samaynta ballanqaad hadiyad waqti dheer ah oo lagu bixin karo ikhtiyaarkaaga ilaa iyo saddex sano. Riix halkan si aad hadiyad bille ah ama deeq joogto ah ugu sameyso internetka.
Qor jeeg: Fadlan samee jeegag lagu bixin karo El Centro de la Raza oo jeegga u dir El Centro de la Raza, 2524 16th Ave. S., Seattle, WA 98144.
Si kasta oo aad u doorato inaad bixiso, ogow in doollar kasta oo kor loo qaaday iyo hadiyad kasta ay aad muhiim ugu tahay hawshayada, hadafkaaga. Waan ka mahadcelineynaa taageeradaada waxaana kaaga mahadcelineynaa saaxiibnimada El Centro de la Raza. Fadlan xusuusnow in shaqaalahayaga, mutadawiciinteena, guddiga iyo ka -qaybgalayaashu ay dhammaantood kuu tixgeliyaan inaad tahay xubin ka tirsan qoyskeena. Waxaad mar walba guri ku yeelan doontaa El Centro de la Raza.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad qof qof kala hadasho ku-deeqidda, fadlan kala xiriir Agaasimaha Fulinta Estela Ortega (206) 957-4613 ama eortega@elcentrodelaraza.org ama Agaasimeheena Horumarinta Ashley Haugen ee (206) 957-4611 khadka tooska ah ama development@elcentrodelaraza.org.